Cayaaraha England Premiership - BBC Somali
Cayaaraha England Premiership
28 Disembar 2010
Cayaar aad u xiiso badan oo dhexmartay kooxaha Arsenal iyo Chelsea, ayaa ku dhamaatay Arsenal oo guulaysatay iyo Chelsea oo laga badiyay.
Cayaartan oo ka dhacaysay garoonka Arsenal ee Emirates, ayaa daqiiqad iyadoo ay ka dhiman tahay qaybtii hore ee cayaarta ay Arsenal gool dhalisay. Waxaa shabaqa ku hubsaday Alex Song daqiiqadii 44-aad.
Markii qabtii labaad la isugu soo laabtay, ayaa dardar kadib Arsenal ay mar kale u suuragashay in ay dhaliso laba gool oo is xiga. Daqiiqadii 51-aad iyo daqiiqadii 53-aad. Waxaa u kala dhaliyay Febregas iyo Walcott.
Chelsea mid ka mid ah goolasha ayay iska soo gudda afar daqiiqo kadib markii goolka 3-aad laga dhaliyay. Cayaaryahankooda Ivanovic ee dhinaca difaaca ka cayaara ayaa kubad la soo cross-ay madaxa ku dhaliyay 57 daqiiqo markii ay cayaartu marayso.
Inkastoo labada kooxba fursado goolal noqon karay heleen, hadana mudadii goolasha intaas ayay ku ekeyd.
Cayaartu waxay ku soo gabagabowday 3-1.
Guushan waxay keenaysaa in Arsenal ay dib ugu laabato booska labaad oo iyada iyo Manchester City, ayaa min 35 dhibcood leh, balse Arsenal ayaa saraysa maadaama ay ka goolal dhalin badnayd Man City, oo 19 kulan cayaartay halka Arsenal ay 18 kulan cayaartay.
Cayaarihii kale ee todobaadkan maalintii Axadda.
Manchester United oo shalay 2-0 kaga badisay Sunderland, ayaa hogaanka haysa oo 37 dhibcood leh, hase yeeshee, cayaar ayay dheer yihiin kooxaha kale, oo cayaar ayaa ka baaqatay.
Tottenham 2-1 ayay kaga badisay Tottenham, Stoke iyaduna 2-0 aya kaga adkaatay Blackburn, waxaa kaloo 2 gool iyo waxba ku adkaaday kooxda Bolton.
West Ham oo ahayd kooxda ugu hoosaysa dhinaca dhibcaha 3-1 ayay ugu awood sheegatay kooxda Fulham.
Manchester City 3-1 ayay ku quusisay kooxda Newcastle, halka Wigan ay 2-1 ugu xoog sheegatay kooxda Wolverhampton.
Tottenham waxay dhinaca dhibcaha ku jirtaa kaalinta shanaad oo Chelsea oo caawa laga badiyay oo 31 dhibcood leh ayay hal dhibic ka hoosaysaa, waxayna leedahay 30 dhibcood.
Wolves ayaa labaatanka koox ugu dhibca hoosaysa oo leh 15 dhibcood, iyadoo Westham iyo Fulham-na ay hal hal dhibic uun ka sareeyaan. Sadexdan koox ayaana liiska ugu hooseysa, hadii ay iyagoo kaalintan ku jira cayaaruhu ugu dhamaadaan sanadka dambe kama sii mid noqon doonaan tartanka England premiership-ka oo booskooda waxaa soo buuxin doona sadexda koox ee ugu sareysa dhinaca dhibcaha cayaaraha heerka labaad ee Division One England looga yaqaan.